Tuesday May 08, 2018 - 11:55:42 in Wararka by Super Admin
Hoggaanka dowladda Kenya ayaa qiray in ciidamo Farabadan looga laayay weerar qorshaysan oo Xarakada Al Shabaab ay ka fulisay deegaan dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha Kenya ayaa war qoraal ah oo uu soo dhigay Bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in melleteriga Kenya looga dilay 9 askari kadib markii Al Shabaab ay qarax kula beegsatay gudaha dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in Argagax iyo Murugo uu ka qaaday markii lasoo gaarsiiyay in ciidamo katirsan melleteriga Kenya lagu dilay weerar ka dhacay Soomaaliya "waqti hore oo maanta waxaan dareemay Argagax iyo murugo kadib markii aan ogaaday in aan ku weynay sagaal kamid ah ciidamadeenna wadaniyiinta ah weerar Argagaxiso oo ka dhacay Soomaaliya" ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha Kenya ayaa ciidamada looga dilay Soomaaliya ku tilmaamay geesiyaal naftooda uhuray wadankooda iyo sidii Nabad looga dhigi lahaa Kenya.
Xarakada Shabaabul ayaa maalintii Sabtida ee lasoo dhaafay xaqiijisay in 15 Askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qarax ay melleteriga Kenya kula beegsatay meel ku dhow deegaanka Dhoobleey ee kaabiga ku haaya xuduud beenaadka labada dal wadaagaan.